Vaovao - Ny niandohana sy ny tantaran'ny menaka tena ilaina
Sina dia tena sivilizasiôna taloha izay nampiasa zavamaniry manitra voalohany hitazomana ny fahasalamana. Ny zavamaniry dia nampiasaina tamin'ny andro taloha, nampiasa toetra mampiavaka ny zavamaniry hitsaboana aretina, ary handoro ditin-kazo manitra mba hampiorina ny firindrana sy ny fifandanjana ara-batana sy ara-tsaina. .
Ny majika voajanahary dia nanome antsika loharanom-piainana mitohy, ary fanomezana natiora ho an'ny olombelona ihany koa, mba hahafahantsika mankafy hatrany ireo harena isan-karazany omeny, ary iray amin'izany ny menaka manitra ilaina. Ny tantaran'ny fampiasan'ny olombelona solika tena ilaina dia lava raha ny tantaran'ny sivilizasiôna olombelona, ​​ary ny tena fiaviany dia sarotra ny manamarina. Araka ny firaketana ara-tantara dia dokotera Arabo no nampiasa distillation hanalana ny voninkazo, izay namboarina ho menaka manitra mandra-pahatongan'ny taonan'ny Gresy taloha. Azo jerena fa ny boky ara-pitsaboana tamin'izany fotoana izany dia nandrakitra fampiasana azo ampiharina amin'ny menaka esansiela, na dia tany Egypta taloha talohan'ny 5000 talohan'i Kristy aza. Mpisoronabe iray indray nameno faty tamin'ny zava-manitra resinina hanamboarana mamanay. Azonao an-tsaina ny lanjan'ireo menaka esansiela tamin'izany fotoana izany.
Any amin'ny fivavahana na foko foko taloha, na inona na inona karazana lanonana na fankalazana, ny zava-manitra isan-karazany nalaina avy tamin'ny zavamaniry dia nampiasaina foana mba hanampiana ny fahamasinana. Afaka mianatra avy amin'ny angano na tantara maro ao amin'ny Baiboly isika. Hita ao amin'ny firaketana izany.
Tamin'ny taonjato faha-13, ny Sekolin'ny fitsaboana Bologna malaza any Italia dia namorona fanafody fanatoranana vita amin'ny menaka esansiela isan-karazany, izay be mpampiasa tamin'ny fandidiana. Hugo, izay namorona an'ity fanafody ity, dia voalaza fa avy amin'ny Sekolin'ny Fitsaboana Bologna ihany koa. Mpanorina.
Tamin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo dia namorona karazana "rano mahafinaritra" i Verminis, ary avy eo ny zanak'anabaviny vavy no nanao ilay "Fanari Cologne" malaza. Ity karazana cologne ity dia voaporofo fa misy fiantraikany amin'ny famonoana otrikaretina, ary io karazana cologne io koa dia vitaina amin'ny menaka manitra voninkazo.
Tany Frantsa tamin'ny taonjato faha-16, ny olona sasany dia zatra nanao fonon-tànana misy zava-manitra misy lavender sy anana isan-karazany ao an-toerana. Vokatr'izany, ireo izay nanao fonon-tànana misy zava-manitra dia nahatohitra kokoa ny aretina valanaretina sasany tamin'izany fotoana izany. Mpandraharaha maro no nanomboka nanam-pahaizana manokana. Ny famokarana menaka esansiela ho an'ny hanitra. Ity karazana menaka esansiela ity dia nanampy ny Grika hanohitra areti-mandringana. Nanomboka tamin'izay, ny aromatherapy mifototra amin'ny menaka esansiela dia nahasarika ny sain'ny manam-pahaizana maro ary nihanaka tamin'ny toerana samihafa. Indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, nitombo tsikelikely ny aromatherapy. Raiso ny sain'izao tontolo izao.
Androany, menaka esansiela no be mpampiasa amin'ny lafiny rehetra. Ny foibe famokarana solika tena ilaina eto an-tany dia ny tanànan'ny Grasse taloha akaikin'ny French Riviera. Noho izany, ankoatra ny divay, i Frantsa dia azo raisina ho toy ny tany masina misy menaka manitra ankehitriny.